Malunga nathi -Shenzhen Aopvision Tech Co, Ltd
Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd. yasekwa ngo-2006, eneemfuno ezizodwa R & D, imveliso kunye neentengiso kushishino lokhuseleko. Sinikezela ngazo zonke iintlobo zeemveliso zeCCTV kubathengi behlabathi, kubandakanya ukuKhangela ubuso be-Smart / ubuso be-IDH. 265 NVR, i-Smart IP Camera, i-Smart 5 KWI-1 XVR, iikhamera zobungcali kunye nokusebenza okuphezulu kwe-HD, iiKhamera zeWiFi kunye neekhamera ze-WiFi NVR, 4G / Wifi Solar Camera . Njengomnye wabenzi abaphambili e-China, i-Aopvision inikezelwe ukubonelela ngetekhnoloji ephezulu, imveliso esemgangathweni kunye nenkonzo yobungcali.
I-Aopvision inengqokelela yeetalente ze-R & D, kwaye isebenzise iminyaka yamava kushishino lokhuseleko e-China. Ngaphezulu kwezi zenza iAopvision iqonga lobuchwephesha kwinqanaba eliphezulu. Inkampani yamkela inkqubo yolawulo lweshishini oluphambili kunye nenkqubo yanamhlanje ye-OA, kwaye yenze imo yemveliso emithathu-in-nye ngemveliso ye-TQC, TPS kunye ne-TPM.
I-Aopvision isebenzisa ngokungqongqo ulawulo lwe-QC ngokusebenza kakuhle kunye neendleko kwakhona. Ke ngoko, sinesiqinisekiso se-ISO2008 seMigangatho yaMazwe ngaMazwe kunye ne-ISO14001 yeSatifikethi soLawulo lwezeNdalo kuZwelonke; Ukongeza, iimveliso zethu zoluhlu zivunyiwe ngezatifikethi ze-RoHS, ze-CE kunye ne-FCC, ezibonelela abathengi ngomgangatho kunye neemveliso zokhuphiswano kunye nokugqwesa emva kwenkonzo yokuthengisa.
Iimveliso ze-Aopvision zisetyenziswa ngokubanzi kumashishini, izakhiwo ezikrelekrele, iihotele kunye neendawo zemarike, kunye neendawo zokuhlala njlnjl. Okwangoku, iimveliso zethu ziye zamkelwa ngempumelelo eMelika, Canada, Japan, Britain, Germany nakwamanye amazwe nakwimimandla.
I-Aopvision inyanzelisa umbono wophuhliso oluqhelekileyo kunye nokuhambelana, kwaye iyazinikezela ekwenzeni ubomi babantu bube noxolo kwaye bukhuseleke kwihlabathi liphela.
"Ukhuseleko ngakumbi, okrelekrele ngakumbi", le yimishini yethu!
I-Aopvision iya kuqhubeka nokuxhasa umoya weshishini we "Professionalization Dedication Concentration", iya kuhlala ikhula, iphonononga kwaye idala kwicandelo lokujonga ividiyo, ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu nezinexabiso eliphezulu, kunye nokwenza elona xabiso liphezulu kubathengi.
Umxholo woLawulo: Sihambelana "nentengiso kuqala, umthengi kuqala", ejolise kwimarike kunye neemfuno zabathengi njengeyona nto iphambili kulawulo. Sisebenze nzima rhoqo sihlanganisa imveliso kwaye siphucula inkonzo yethu. Besisoloko sikunye nawe.
Inkqubo yoMgangatho: Siseka amaziko emveliso kunye namaziko asemgangathweni, aseke inkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo. Zonke iimveliso ziyavavanywa ngokuthembekileyo kunye nokusingqongileyo ngaphambi kokuthunyelwa. Siphumeza ngokupheleleyo inkqubo ye-ISO9001: yolawulo lomgangatho ka-2015 kwaye safumana isatifikethi.
Inkqubo yokusiNgqongileyo: Sifumene isiqinisekiso se-ISO14001, ukuqinisekisa ukuba inkampani ayinasiphumo sibi kwindalo esingqongileyo.Sifumene isiqinisekiso seROHS, zonke iimveliso zethu kunye nezinto eziyimveliso zenziwe zakwimigangatho yeROHS.
I-1-Panasonic kwangaphambili yeNPM SMT Line, isantya esiphezulu, kunye ne-Yamaha SMT LINE
2-Cwangcisa ubushushu obuPhezulu boMoya oPhezulu
Umgca-3 weNdibano yeNdibano
Iqela le-4 leQela le-R & D lomntu we-50
Ubungakanani beKhithi yenyanga: 200K yeeKhamera, 30K-50K ze-DVR / NVR